FAQ - Washi Makers
Iwe uri mugadziri kana kambani yekutengesa?
Washi vanogadzira washi tepi mugadziri kubvira 2009.
Isu tine yedu mutsara wekugadzira muDongguan China uye tine yedu mumba pamusoro pemakungwa sevhisi yevatengi kupa imwe yekumira tattoo zvimiti sevhisi.
Tinogona here kuva nelogo yedu kana ruzivo rwekambani kuti tidhindwe pane zvigadzirwa kana pasuru yako?
Chokwadi.Ivo vanogona kuratidzwa pane zvigadzirwa zvako kana pasuru.
MOQ 50 rolls yetsika dhizaini washi tepi.Hapana MOQ yemagadzirirwo edu azvino uye zvinhu zvakasiyana zvinogona kusanganiswa.
Ose ari maviri OEM uye ODM anowanikwa.Tsika dhizaini washi matepi anogamuchirwa zvakanyanya.Tine makumi maviri ekuprinda Techniques uye hapana colorlimited inogona kudhindwa yewashi tepi.
Mu-mumba kugadzira nekutonga kuzere kweiyo productionprocess & chengetedza kuenderana.Inogona kupa yemahara yakagadzirira yakagadzirwa sampu yekutarisa kumberi kwemhando.
Nezve Kudzivirirwa kwekodzero dzeKugadzira
Yemahara Haitengese uye kutumira, chibvumirano chakavanzika chinogona kupihwa.
Ese mawashi tepi rolls anozotariswa ne100% kutariswa tisati tarongedza kuti tive nechokwadi chemhando yakanaka kune vese vatengi vedu, uye tinoarongedza zvakanaka kwazvo kana atumirwa.Kazhinji, iwe unogashira mutoro wako uri muchimiro chakanaka.Kana chero mhando yemhando yewashi tepi, isu tichagadzirisa nayo nekukurumidza.
About No pachake dhizaini
300+ mumba yemahara mifananidzo ine akasiyana theme inogona kusarudzwa.
Proffesional dhizaini timu inobatsira kugadzira kana kupedzisa nemufananidzo wako wedhizaini, kuona chero yeako edhizaini mazano kana uine noida dzemagadzirirwo.
Nzira yekuvimbisa kunaka?
Isu tine yakakwana yemhando yekudzora sisitimu, semuenzaniso, isu tichava nenzvimbo yekutarisa panguva yekugadzira uye tichava nekutarisa kwakazara muchikamu chekupedzisira chepakeji.Uye isu tichapawo sevhisi yemashure-yakachengeteka, pawakagamuchira zvigadzirwa zvisingagutsikane, iwe unogona mhinduro kwatiri, isu tichatora panguva uye inoshanda chiyero, sekugadzirisa kana kutsiva, uye isu tichaitawo rekodhi muQC system yedu. kudzivirira nyaya dzakafanana panguva inotevera.
Unogona here kupa mahara samples?
Ehe, tinogona kupa sampuli yemahara kana iwe ukasimbisa iwe uchatiisa odha kwatiri.
Zvakadini nezvenguva yemuenzaniso yekutungamira?
Kune zvigadzirwa zvemasheya, samples dzinogona kutumirwa mumazuva matatu ekushanda.
Kune sampuli dzetsika, sampuli dzinogona kutumirwa mumazuva ekushanda e7.
Ndedzipi nzira dzekubhadhara?
Isu tinobvuma PayPal, T/T kuendesa kubhengi.
Yakawanda sei dhipoziti inoda kubhadharwa isati yagadzirwa?
1) Kune diki odha uye nehosese yedu stock madhizaini, isu tinopa zano PayPal uye 100% kubhadhara sezvo odha inogona kurongeka uye kutumirwa mumazuva gumi nemashanu ekushanda.
2) Nekurongeka kwetsika uye diki qty, isu tichakurudzira PayPal uye 100% kubhadhara sezvo tsika odha inogona kurongeka uye kutumirwa mumazuva gumi nemashanu ekushanda.
3) Pamari yakawanda, tinogona kugamuchira 50-70% sedhipoziti uye chiyero tisati tatumirwa patinopa mapikicha kana vhidhiyo yezvinhu zvakazara.
Ndeipi nzira yekutumira?
Zvezvinamira zvema tattoo, sezvo iri kutakura huremu uye kwete kuyerwa kwekutakura, saka kazhinji isu tinotakura nekutumira kune dzimwe nyika, seDHL/Fedex gonhi nesuo;kana qty yakakura uye ichirema, kuitira kuchengetedza mutengo tichakurudzira ngarava nemhepo DDP.
Ndeipi nguva yekutanga yekutumira?
1) Kune International Express, senge DHL / Fedex, nguva yekutumira ndeye 5-7mazuva ekushanda.
2) Yekutumira nemhepo DDP, nguva yekuendesa ndeye 12-18working mazuva.
3) Kana zvasvika panguva yakakosha, sedenda repasi rose, kutakura kwepasirese kuchakanganiswa uye kuchasangana neemail.
Ndeipi mutengo wekutumira?
Kana zvinonamirwa zvauya nezvakajairwa kurongedza, huremu hwezvinhu huremu. uye heino mutengo wereferensi yezvinhu 1kg kuenda kuUSA kuburikidza neDHL yekutariswa: gonhi nesuo USD29.
Ndapota taura nesu kune chaiyo yekutumira mutengo weodha yako qty nenzvimbo.